HEMA BOOKS Waxaan Leeyahay ‘‘Hal Xaaraan Ahi Nirig Xalaal Ah Ma Dhasho’– Qalinka: Axmed Cabdilaahi Cumar | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha HEMA BOOKS Waxaan Leeyahay ‘‘Hal Xaaraan Ahi Nirig Xalaal Ah Ma Dhasho’– Qalinka: Axmed Cabdilaahi Cumar
FoorenewsApr 09, 2018Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
Waxaan qormadan kooban kaga hal celinayaa, hadal hawaawi ah oo si hubsiimo la’aan ah ay shirkada HEMA BOOKS markii ay halacdhoontay ee dad aqoonyahan, sharci yaqaano iyo warbaahinta kala duwani si heer sare ah ugu iftiimiyeen ummadda Soomaaliland qaabka ay ku heshay sharkadu qandaraas ku-sheega Buugta Manhajka dalka oo dhan, kaas oo kooto loogu xidhay HEMA (15 sanno).
Wuxuu yidhi hal abuur Hadraawi:
Ama fiiro loo odhan,
Caanahaan fal qurux badan,
Ama fiiqsi loo dhamin,
Wuxuu yidhi nin faaqiday
Way kula fogaadasan
Oo feedhahay wax yeelaan.”
‘‘Hal Xaaraan ahi Nirig Xalaaal ah ma Dhasho’’, waa murti fac wayn oo soomaaliyeed. HEMA waxay is tidhi ka qariya bulshada xaqa iyo xeerarka dastuuriga ah ee xaaraantinimaynaya kootada iyo qaabka xididnimo iyo xigaal ku macaashka ah ee loogu xidhay in ay (15-ka sanno) ee soo socda dalka oo dhan Buugta Manhajka u daabacaan, markii aqoonyahankii iyo sharci-yaqaanadii muwaadiniinta ahaa ay bulshada si hufan oo hannaan aqooneed iyo hab sharci heer sare ah ugu iftiimiyeen daweynaha; laakiin kumay xisaabtamin in caqliga ummadda aanay caayi karin calooshood u shaqaystayaal aan dheef mooyee dhugmo ka durugsan lahayn. Geel jiraha ayaa geela ugu heesi jiray ‘‘Ninna dhuunuu kuu dhex joogaa, Ninna dhaqashuu kuugu dhabar jabay.’’. Waxa ay hadalkii ka aradnaa runta ee ay warbaahinta ku faafiyeen ku sheegeen in ay Shirkada Hema bilaabeen 2009, taas oo ah been qaawan, sababta oo ah waxay wakhtigaa HEMA ahayd (BOOK SHOP) yar oo dugsi gaar ah buugtiisa lagu iibin jiray. Hase yeeshee Buugta Dugsiyada Hoose/Dhexe ee manhajka dalku HEMA ka hor bilaash ama lacag la’aan ayaa loogu qaybin jiray dugsiyada dalka oo dhan dacal ilaa daraf. 2016-kii ayay HEMA hab xaaraan ah oo aan loo marin hannaanka qandaraasyada ee dalka u yaal ku qaadatay daabacaada buugta. Waxa xusid mudan wadankeena waxa jira dad muwaadiniin ah oo maal gashaday oo keenay madbacado waaweyn oo ay ka shaqeeyaan dad aad u badan oo reer Soomaaliland ah, cashuur-bixiyayaal ah, shaqo abuurna dalka u sameeyay oo xataa haddii ay ka daabacdaan lahayd Shirkada Hema awoodi kari lahaa; taasi oo bedelkeeda ay shirkadaas xaaraanta ahi ka door biday in ay dalka dibadiisa ku soo daabacdo Manhajkii Dalka oo ay macaash badan oo aan dawaladuna waxba ku lahayn ka helaan. Taa waxa dheer, buugtii ay waligood daabacan jireen dugsiyada gaarka ah qaarkood ayay xaday shirkadani oo ay soo daabacday taas oo marageeda oo buuxa la hayo markeedana la soo bandhigi karo. Waxa iswaydiin mudan dawladdu Manhajka Qaranka haddii ay shirkad macaash doon ah u daba fadhiisatay Madbacadii Qaranka iyo Madbacadii weynayd ee ay lahayd Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniskuna iyo kuwii muwaadiniintu lahaayeen ee dalka maalgashaday ee shaqo abuurka sameeyaymeeye oo maxaa loogu talo galay in ay qabtaan?. Wax badan oo qaloocday oo qaldamay ayaa looga fadhiyaa dawladda cusubi in ay si xikmad ah u saxdo. Talaabada Madaxweynuhu qaaday ee ah in buugta bilaash lagu siiyo ardayda Dugsiyada Hoose/Dhexe waa mid ammaan mudan oo geesinimo ah, laakiin mudane Madaxweyne yaan laguu qarin booraan qafilan oo qabar ka hooseeyo oo lagu xalaalaysanayo qandaraasyo xaaran ah. Haddii ay xukuumaddu ka maarmi waydo daabacaada Buugaagta Manhajka ee Qaranka in ay u kaashato sharkad gaar ah waxa muddan oo xalaal noqonaysa in si xaq ah loogu tartarnsiiyo muwaadiniinta dalka ee shaqadan qaban karaya islamarkaana u diyaar ah in ay dalka dhaqaalahaa dibada u baxaya ku celiyaan. Sidaas darteed mudane Madaxweyne maadaama oo aad maanta talada qaranka aad gacanta ku hayso waxaan kaa codsanaynaa in aad si deg-deg ah arrinkaa wax uga qabato. Waxaan leeyahay xaaraan ku macaashayaasha xoolihii ummadda ku xalaashaday xaq-soor la’aan looguna xidhay xaq aanay lahayn, ka xishooda ummadda oo xaqdhawra, idiin ma xalaaloobaysee. Haddii kale xaalkiinu wuxuu noqon maansaddii hal abuur Hadraawi ee uu yidhi:
“Damiirku hadduu engago
Hadduu dufan raadis yahay
Daliilka hortiisa yaal
Waxaa kaga beegan daah
Waxaan magac doolar sidan
Diinaar iyo lacag ahayn
Yaqiin kamasii dayaan
Dad badanina waa sidaas
Dunuunuc bukay liqeen
Debnay la haliilayaan
Dalqay wax ku eegayaan”.
Previous Post“Reer Gabiley Way Dulman Yihiin, Dad Ayaa Ku Dul Nool Oo Dhiiggooda Caba Sida Reer Saaxil, Kuwii Dulmiga Ku Waday Markaanu Is Nidhi Ka Qabta Oo Sharciga La Tiigsada Ayaa Iyagii La Noo Maqlay”....Ramaax Next PostHargeysa : Dhallinyaro Baangado Ku Hubaysan Oo Duhurka Cad Badhtamaha Suuqyada Dadka Ku Baadhanaya Iyo Shacabka Oo Agabkooda Qaaliga Ah Lasoo Mari Kari La’